बिहान चाडैं उठन् अल्छि लाग्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्: बिहान चाडैं उठनु तपाईको स्वस्थ्यको लागि धेरै लाभदायी | Lek Besika Bhakaharu - Online News Portal
बिहान चाडैं उठन् अल्छि लाग्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्: बिहान चाडैं उठनु तपाईको स्वस्थ्यको लागि धेरै लाभदायी
बिहान चाडैं उठनुको धेरै फाइदा छन, विहान चाडैं उठनाले मानिस स्वस्थ्यमा धनी र बुद्धिमानी हुन्छ । तर पनि यस्तो पाइएको छ विहान चाडैं उठदा तपाई आफूलाई स्मरणिय कार्यमा लगाउन सक्नुहुन्छ ।
कार्यतालिको हिसाबबाट तपाईले आफूलाई दैनिक उठने समय भन्दा एक वा दुई घण्टा पहिला उठ्न सजिलो छैन र यसमा कठिनाई आउँछ । तर सत्यता यो छ कि विहान चाडैं उठनुको धेरै फाइदाहरु छन । तपाईको शारीरिक र मानिसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र तपाईको जीवन धेरै उत्पादक र सफलता बनाउँछ।
यहाँ विहान चाडैं उठनको लागि केही उपयोगी टिप्स र सुझाव बताएको छ:
विहान चाडैं उठनको लागि अलार्म सेटले तपाईलाई सहयोग गर्नेछ । अगाडिका योजना बनाउनु होस र विहान चाडैं उठने योजना वास्तविक दिन भन्दा करिब एक हप्ता पहिले बनाउनुहोस ।
खासगरी यो छोराछोरीलाई विद्यालय पुर्याउन र कार्यालय समयमा पुग्नको लागि सहयोग गर्नेछ । हरेक दिन उठनको लागि समय भन्दा १०–१५ मिनेट पहिला उठने प्रयास गर्नुपर्छ, यही प्रयासले तपाईलाई सजिलो बनाउँछ र समयको साथमा समायोजित गराउँछ । यदि घडिका अलामले तपाईलाई विहान चाडैं उठन दिक्क गरेको छ भने अरु सदस्यलाई विहान चाडैं उठाईदिनु भन्न सक्नुहुनेछ। नियमित रुपमा सुत्नको लागि एक दैनिकी तयार गर्नुहोस यहाँ सम्म कि हप्तामा एक चोटी हुने छुट्टीको दिनमा पनि यो बानीले तपाईलाई विहान चाडैं उठनको लागि मद्दत गर्दछ। पर्याप्त निदाउनु पर्छ किनकी तपाई आफूलाई ताजा तन्दुरुस्त महसुस गर्न सक्नुहुनेछ । दैनिक करिब ७–८ घण्टा निदाउनु स्वास्थ्यको लागि लाभदायिक मानिएको छ। यस्तो गर्नाले विहान चाडैं उठन अल्छि लाग्दैन ।
बिहान चाडैं उठनु तपाईको स्वस्थ्यको लागि धेरै लाभदायी हुन्छ, अनुसन्धानमा पत्ता लगाएकोे छ कि विहान चाडैं उठनेहरु साधारणतया धेरै सक्रिय र उत्पादक हुन्छन । अध्ययनमा यो पनि पत्ता लागेको छ, विहान चाडैं उठने व्यक्ति वास्तविक जीवनमा राती ढिलो सम्म नसुत्नेको व्यक्तिको तुलनामा धेरै खुशी रहन्छन।
आज ठूलो एकादशी,के के गर्न हुन्छ ? नगर्नुस् यस्ता काम परिएला संकटमा
उठ्ने वित्तिकै गर्नुहोस् यी काम, पैसाको कमी हुँदैन्(पुरा हेरेर शेयर गर्न नछुटाउनु)
भ्यालेन्टाइन डे कै दिन लाईभ दोहोरिकी रानी डिला बिकलाई पर्यो यस्तो आपत (हेर्नुहोस भिडियो)3months ago
फेरी बन्यो अर्को जोडी भाइरल [कारण यस्तो छ]3months ago
अर्को चुनावमा आउँदा गत वर्षको चुनावमा जस्तो धुलोमैलो सहनु नपरोस्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’3months ago
दुई युवतीको शानदार डान्स, भयो रातारात भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो)3months ago
प्रधानमन्त्री ओलीको गर्जन: जङ्गलमा दुइटा बाघ छन-राजतन्त्र फर्काउने सपना नदेखे हुन्छ (भिडियो सहित)3months ago
राजा ज्ञानेन्द्र शाह नाच्दा हल्लिने यो कस्तो गणतन्त्र हो ?: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा3months ago